Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo lagu dilay 20 ruux - BBC Somali
Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo lagu dilay 20 ruux
Image caption Ciidammada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ayaa Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika loo diray 2014-kii
Malayshiyo ayaa 20 ruux ku dishay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyaga oo dhaawacay tiro kalena.
Waa mashaqadii ugu xumayd ee dhiig ku daato oo muddo bilo ah ka dhacda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe.
Jimcihii ayaa waxa isku dhacay labo kooxood oo ka kala tirsan fallaagadii hore ee Muslimiintu u badnaayeen ee Seleka iyo kuwo ka tirsan dhaqdhaqaaqii ka soo horjeeday ee Anti-Balaka ee masiixiyiinta ah.
Nabad ilaaliyeyaasha qaramada midoobay ayaa sheegay inay kala dhex galeen labada kooxood ee ku dirirayay goobta dilku ka dhacay oo ah magaalada woqooyiga ku taala ee Kaga Bandoro si ay uga hor tagaan in qalalaasuhu sii baaho.
Af-hayeen u hadlay madaxtooyada ayaa sheegay in dagaalyanadii horee Seleka ay dagaalkaa ka dib bilaabeen inay guryaha dadka ay laayeen mid mid u galaan si ay dadka u laayaan.
Waxaa lagu soo warramayaa in ay dad ka qaxeen magaalada.
Jamhuuriyadda Afrikada dhexe waxaa ka socday dagaal diin ku salaysan tan iyo bishii March ee sannadkii 2013, oo ahayd markii fallaagada Saleka ay awoodda kala wareegeen madaxweynihii xukunka laga tuuray Francois Bozize oo masiixi ahaa.
Kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaaladaas boqolaal kun oo kalena way ku barakaceen.
Qiyaastii kow iyo toban kun oo askar nabad ilaalin ah oo Qaramada midoobay ka socda ayaa la geeyay dalkaas
Qalalaasahan soo cusboonaaday wuxu calaamad u yahay in aan xasiloonidii weli si buuxda loogu soo dabbaalin dalka.